Lenovo Thinkpad X1 yeCwecwe Review - News umthetho
Lenovo Thinkpad X1 yeCwecwe Review
Great screen, design ngamandla, brilliant ikhibhodi lokuduma 3 ukwenza sesithathu-isizukulwana ThinkPad X1 yeCwecwe udibaniso esinamandla
Eli nqaku obizwa “review Lenovo Thinkpad X1 yeCwecwe: njengoko kulungileyo, njengoko Surface Pro kodwa USB-C” yabhalwa ngu uSamuweli Gibbs, ngokuba theguardian.com ngoLwesine 11 October 2018 06.00 i-UTC
Lenovo lesithathu-isizukulwana ThinkPad X1 yeCwecwe ujolise ukuba akukho-ukusilela Windows 10 detachable esinika abasebenzisi oko Surface Microsoft akuyi: USB-C no lokuduma 3.
Ifom factor uyiqhelile. Elona ikhompuyutha ndazikhamela lube tablet 8.9mm zamafu kunye kickstand ngaphandle ngasemva kunye keyboard magnetically eqhotyoshelwe ukuba iyavuka kwi engile alinawo engcono.
Kodwa apha Lenovo isuka lokuwina Surface yomnyingi 2-in-1 ifomula, bezisa ezityiwa ThinkPad efana ingono sokukhomba, amaqhosha iguqule, emele emile yezitshixo ibhodi yezitshixo kunye 4G indlela-penny nomtsalane.
Oko akuthethi kuthi oku workhorse enyulu, kodwa umsebenzi ipeyinti Mat-abamnyama, ThinkPad logo kwaye bomvu iimbalasane yamandulo ngenkangeleko ngokuqinisekileyo ukunika uluvo lo matshini kumalunga ukwenza izinto.
I-13 screen likhulu kune uza kufumana kwi umphezulu Pro kwaye i angkasa V, kwaye kwenza kube lula ukuyisebenzisa solo njenge laptop. Ikhusi kukodwa pin-ezibukhali, ezimibalabala nje eqaqambileyo ngokwaneleyo ukuze usebenzise phandle. Movies sihle kuyo, kunye angles emihle ukubukela, kwaye lo gama bezels ehlabathini ngaphandle ezinkulu kakhulu, ukuba ukuhlalisa izithethi ezimbini phambi elijonge, isithwebuli weminwe kunye Hello Windows-inkqubo ukuqondwa ubuso IR inikwe.
Le kickstand ziyafana leyo Pro Surface kwaye ukuza kuthi ga ngoku simse propping i tablet detachable, nokuba ngokwayo okanye idityaniswe yezitshixo. Thatha: Samuel Gibbs for the Guardian
Ngasemva i kickstand okuqinileyo-imvakalelo kunye engile ngeentlobo motion, leyo kanye njengokuba ulungile nje ukuba ngasemva Pro Surface, yaye ilungele ekufumaneni esinekona sasekunene ethangeni lakho okanye idesika.
Izithethi phambi-elijonge ezi mhlawumbi ingongoma ebuthathaka xa usebenzisa i X1 yeCwecwe njenge umatshini media, kuba nangona icacile kwaye ukungathembeki-free, kwaye nayo elikhulu kakhulu kwaye abanalwazi naluphi na uhlobo bass. Baya kuba kakuhle ukuba sele isandla-ephethe umatshini ukubukela umboniso TV, kodwa ukubukela into ukupheka nokuva kuqhubeka ntoni ngaphezu fan extractor yi no-hamba.
Icwecwe X1 yenzelwe ukuba ixesha elide ngaphezu kakhulu. Iskrini ehlanganiswa uyibhala Gorilla Glass, njengezininzi ukhuphiswano, kodwa umgca ThinkPad i unembali yokuya uchatha kuvavanyo nxamnye ukufuma, lokungcangcazela nokothuka mechanical, ithetha ukuba kufuneka ukumelana jolts zemihla jostles emsebenzini.
processor: Intel quad-core enguNdoqo i5 okanye i7 (8esizukulwaneni th)
ukugcinwa: 256, 512GB okanye 1TB SSD
Inkqubo yokwenza: Windows 10 Ekhaya okanye Pro
ikhamera: 8MP emva, 2MP phambi elijonge
Uqhagamsheleko: Fi ac, ibluetooth 4.1, 2x lokuduma 3 (USB-C), headphones, TPM, microSD, ukuqondwa ubuso, zeminwe scanner, ungayikhetha sim nano kunye NFC
Ubukhulu: 304.1 x 226 x 8.9mm (15.1mm ikhibhodi)
Weight: 890g (1,270g ikhibhodi)
isiphelo High-yokusebenza ultraportable
Le khalenda kunye yezitshixo snap kunye iimagnethi. Thatha: Samuel Gibbs for the Guardian
I X lwezihloko kuhle umgca ThinkPad isiphelo top-Lenovo kaThixo, nto leyo ethetha ukuba yeCwecwe X1 iza onke amandla kwaye kungenzeka ukuba afune.
Oko kuquka ukhetho lwakho zakutshanje wesibhozo-isizukulwana quad-core Intel i5 okanye i7 iprosesa, 8 okanye 16GB of RAM nenala yokugcina.
Lo matshini njengoko lahlolwa a Intel Core i7-8550U iprosesa, 16GB of RAM, 512GB yokugcina 4G, kwaye ngokuphelele ukundiza zonke ndaziphosa lilo.
Ngelixa integrated Intel UHD 620 ikhadi yemizobo isenokuba obhekiswe tablet X1, umatshini bakwazi ukusingatha ezinye 23,000-pixel imifanekiso emikhulu ngokubanzi ngaphandle ngokwaphula kakhulu of ukubila.
Abalandeli kweli cwecwe umlilo phezulu kaninzi ngaphezu kwezinye okhuphisana, kodwa ke musani ukufumana ingakumbi elikhulu, ngaphandle kokuba ukwenza into iprosesa-olunzulu kakhulu. Ixesha elininzi iba inaudible kwindawo ofisi i.
ekuqhutywe ngayo xa iyonke elihle, afanayo ukuba isiphelo ophezulu-umatshini ultraportable, kodwa musa ukuba ukwenza yokudlala ngamaXhosa kuwo - zange ungayizama unekhadi graphics zangaphandle.
ibhetri iiyure ezisixhenxe
I Matt black ibukeka buthuntu kancinci, kodwa uziva ngathi kuya ukuxhathisa imikrwelo kwaye scuff. Thatha: Samuel Gibbs for the Guardian
Enye yezinto nto wabingelela ezininzi PC tablets na ubomi bebhetri. Lenovo ucaphula ubomi "ngaphezulu kune--imini yonke" ibhetri iiyure-and-a-ezisithoba ezinesiqingatha, kodwa inyaniso Icwecwe ThinkPad X1 ihlala iiyure ngeenxa kuphela ezisixhenxe phakathi izityholo. Oko kwaba ne "ubomi bebhetri Better" amandla ukubekela esebenzayo, usetyenziso lwamagama in Typora, lokhangelo lweencwadi Chrome, usebenzisa Nextgen reader, ethile umfanekiso ukuhlelwa Ubuhlobo Photo kunye ezininzi email Imeyili Microsoft.
Akwanelanga ukuba ngenxa ezininzi umsebenzi wosuku, kodwa akwanelanga ukushiya itshaja ekhaya ngeentsuku olunzulu. Okuvuyisayo kukuba nje lisebenzisa USB Power Delivery kwamacala, nayiphi USB-C itshaja kunye nomlinganiso wamandla ombane ezaneleyo kufuneka basebenze ezifana nezo ngenqanawa namanye laptops okanye multi-tshaja ngokubeka ngaphandle 30W okanye ngaphezulu.
lokuduma 3 ichweba
Two lokuduma 3 ichweba, a Kensington yokutshixa slot kwaye itreyi sim card bonke kwicala elinye. Thatha: Samuel Gibbs for the Guardian
Icwecwe X1 iza lokuduma amabini nje 3 namachweba kabili njengoko kumazibuko USB-C. Ukuba lokuduma 3 kuba lulutho kakhulu njengoko akupheli ukwanda ubunakho, kuquka grail engcwele ngentambo enye imali, ukudibanisa 4k esweni yaye zonke ezinye neuropathy onokucinga ngayo. Yinto inzuzo ebonakalayo phezu okhuphisana ukuba abanakho nokuba USB-C.
kunjalo, ukuba mazibuko mabini kuphela, enye eya kufuneka ukuba amandla, kuthetha ukuba uya uthembele amachweba okanye neenafu. Akukho nto imbi kangaka kuninzi, kodwa isuntswana izibuko-kukhona alinakuze ukuba awunayo imali ngendlela esemkhumbini okuthile.
Kukho kwakhona ikhadi le-microSD umfundi, enkulu, kodwa ukuba obufihlwe SIM-slot efana nawe uya kufumana kwi efowuni. Yinto ayisebenzi njenge imemori khadi umfundi eshushu-swappable njengoko ufuna isixhobo SIM ejector ukuba bendinokuphuma, kwaye kuthetha ejecting i 4G SIM ukuba umelwe kukuba enye ngexesha elinye.
Ikhibhodi elihle, kwaye kungcono kakhulu laptops. Thatha: Samuel Gibbs for the Guardian
Ngokungafaniyo Pro Surface-Microsoft, Icwecwe X1 iza ikhibhodi, yaye yintoni keyboard ngayo. Windows 10 detachables ezifana kule live okanye kufa nomgangatho keyboards, njengoko uninzi xesha xa like a laptop.
keyboard Lenovo yeyona ilungileyo mna andiphathanga nakweyiphi detachable, kwaye ngaphezu uninzi laptops. Izitshixo zigcwele-ubungakanani, okuqinileyo, uziva enkulu phantsi iminwe yakho yokuhamba ngokwaneleyo ukwenza ukuba lethuba, eyanelisayo amava typing.
Le iguqule kuhle ngokulinganayo. Yinto pretty big, has a smooth, phezu ngqo kunye unqakrazo eqinileyo kuyo, kwakunye inala ongakhetha ukuba wenze amava. Kodwa akukho naye ThinkPad isithwalandwe ekwimo elibomvu kwingono TrackPoint phakathi G, H and B keys, amaqhosha amathathu mouse phakathi kwibha kunye iguqule. Ndafumana ukusetyenziswa kancinane kubo ngaphandle xa kuloliwe apho ekupheleni keyboard waxinwa ibe nakwa bam yi legroom zero uvimba iguqule.
I-keyboard unayo ezingathandekiyo yayo, ezifana iqhosha Fn kwi ezantsi ekhohlo kwikona endaweni Ctrl, into kwakufuneka phantse nangoko tshintshela zingajikelezi izicwangciso imisipha-memory cut and paste. Akukho naziphi na izitshixo eendaba mhlawumbi.
Isikeni Fingerprints has a bit iseti engaqhelekanga phezulu, kodwa isebenza kakuhle xa awufuni ukusebenzisa inkqubo ukuqondwa ubuso. Thatha: Samuel Gibbs for the Guardian
Icwecwe X1 inenkqubo ukubonwa kobuso IR-based loo nto kanye njengokuba okulungileyo njengoko oko kumgca Surface-Microsoft. Uvumela ukuba evela lock-screen kwaye ngokuzenzekelayo imbawula kuwe, ngokwenza login nokujika.
Kukho kwakhona isithwebuli weminwe, nto leyo eye indibanisela engaqhelekanga ephezulwana ngokucofa kwaye ku- nokubhalisa fingerprint yakho, kodwa isebenza kakuhle zemihla ngemihla operation. Andizange iphele up ukuyisebenzisa kwidesika njengoko ukuqondwa ubuso yasebenza kakuhle ukuze, kodwa luncedo lokuvula cwecwe xa Pilot portrait, kunye iinketho sebhayometriki ngakumbi ngcono.
Ukuvula cwecwe X1 luvule keyboard kufuneka ukubetha iqhosha amandla okanye cinezela Fn isitshixo kwibhodi yezitshixo
Ufumana ukhetho of Windows 10 Ekhaya okanye Pro
I ozikhethela ThinkPad Pen Pro omfisha waya ecaleni kumatshini kunye umnikazi detachable kwaye isebenza kakuhle emakishayo phezulu okanye yokusayina amaxwebhu
I Lenovo oya app ithatha unonophelo updates umqhubi kunye nezicwangciso amakhulu cwecwe X1 nge idalwa encinci
Eyesithathu-isizukulwana Lenovo ThinkPad X1 yeCwecwe iqala ngo £ 1.480 nge sohla i5 kumqhubekekisi, 8GB of RAM, 256GB of ukugcinwa kunye nebhodi yezitshixo kunye ihamba ngaphandle kwi £ 2.422 ngazo zonke iinketho.
Lo matshini njengoko kuvavanywa malini £ 1,973.59 kunye sohla i7 kumqhubekekisi, 16GB of RAM, 512GB yokugcina 4G.
ukulinganisa, Umphezulu Pro-Microsoft 6 iqala ngo £ 879, kunye ngokufanayo imifuziselo ngexabiso cwecwe X1.
Icwecwe ThinkPad X1 ingqina ukuba Lenovo unako ukwenza into enkulu detachable 2-in-1 Windows 10 lwekhompyutha. Yinto eqolo, kodwa inikeza iinkcukacha ezifanayo okanye ngaphezu nembangi yayo oyintloko i-Microsoft Surface Pro, kubandakanywa i-ezifuneka kakhulu Ukukhethwa kwizibuko namhlanje lokuduma 3.
Icwecwe X1 kubengathi kuthatha ngokundibetha kwaye uya kusinda nobunzima yokusebenza mobile, leyo loko lwenzelwe. Isikrini mkhulu, yaye 13 yi ngobukhulu, i kickstand kunye nebhodi yezitshixo zizinto brilliant and komsebenzi top-notch.
Le iiyure ezisixhenxe ubomi bebhetri kungaba ngcono, kodwa 4G ezimanyanisiweyo iinketho ezimbini sebhayometriki esifakwe bavumelekile. Kodwa nangoku umatshini ongcono umsebenzi ngaphezu ukudlala, kodwa kulungile ngokwaneleyo ukutsala umsebenzi kabini ngaphandle zonke ufuna ukwenza i videos ujongo ukusuka kulo lonke igumbi.
Ukuba emarikeni ibe isiphelo top-2-in-1 Windows 10 detachable, i Lenovo ThinkPad X1 yeCwecwe kufuneka ibe kuluhlu lwakho.
kwizazi: zokwakha eqinileyo, screen esihle, brilliant ikhibhodi, lokuduma 3, 4G, ikhadi microSD umfundi, zeminwe scanner, ukuqondwa ubuso
bendlela: kumazibuko amabini kuphela kwi-USB-C, microSD ikhadi umfundi akukho lula, ezibizayo
Le dot ebomvu kwi 'i' uba xa mshini ku standby. Thatha: Samuel Gibbs for the Guardian
Microsoft Surface review Go: tablet kunilungele umsebenzi ngaphezu ukudlala